Iindlebe zokugqibela IBHOMU 3, isithethi esineendawo zonke kunye nawo wonke umgangatho | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Ihlaziywe 17/02/2020 11:22 | ngokubanzi, Reviews
Sele silonwabele uhlalutyo lweemveliso ngamanye amaxesha ezivela kwii-Ultimate Ears, isahlulo seLogitech esinoxanduva lokumamela izixhobo ezingenazingcingo ezikumgangatho ophezulu. Umzekelo uluhlu lweWonderboom, eyona incinci iseti yezithethi ezirhabaxa sinalo kolu hlalutyo.
Ngeli xesha sineyona indala kubazalwana, i-Ultimate Ears BOOM 3 ezandleni zethu ukubona ukuba yeyiphi inguqulelo yakutshanje yenye yeeflegi zabo ekufuneka isinike yona. Hlala nathi kwaye ufumane i-Ultimate Ears BOOM 3, isithethi esinganyangekiyo esidadayo kwaye sinike isandi esinamandla ngokwenene, Ngaba kufanelekile?
Como siempre Siza kuhlalutya nganye yeenkcukacha zesixhobo ukuze ubenobunzima bokuthenga kwakhoKwisithethi esinjalo kufuneka sigxile kulwakhiwo, unxibelelwano, ukuhambelana kwaye kunjalo nomgangatho wesandi saso. Kucacile ukuba esi ayisosinye isithethi, kwaye nabani na ozamile uluhlu lwee-Ultimate Ears BOOM wazi kakuhle, ke hlala nathi kwaye ufumanise ukuba kufanelekile ukuhlawula I-118,15 euro ebiza kule khonkco leAmazon. Ngaphandle kokuqhubela phambili, masihambe nohlalutyo olunzulu.
1 Yomelele, inkulu, kodwa intle kakhulu
2 Izixhobo zekhompyutha kunye nezinto zonxibelelwano
3 Iqhosha loMlingo kunye nesikhululo sokutshaja
Yomelele, inkulu, kodwa intle kakhulu
Imodeli yangaphambili yayixhathisa kakhulu, inkulu kwaye inamandla, nangona kunjalo, kuninzi lwethu kwakunzima ukufanisa uyilo lwayo kuzo zonke iintlobo zeemeko, yayilihlazo ukuba yaphule i-aesthetics yegumbi ngenxa nje yokugubungela irabha enkulu yesandi esimnandi esivezileyo kunye nokuzimela ngokubanzi. Nangona kunjalo, Iindlebe zokugqibela zithathe isigqibo sokwenza into embindini phakathi kokumelana kunye noyiloNgeli xesha, ukubheja kwizixhobo ezifanayo, kodwa ukutshata nabo ngendlela yokuba ukubheja kulula kunika iziphumo ezifanayo ngaphandle kokutsala umdla omkhulu. Ungaluthengela olu hlelo ngemibala emithandathu: Luhlaza, mnyama, mfusa, bomvu, pinki noluhlaza ohlaza.
Ubungakanani: 73mm ubukhulu x 184mm ukuphakama
Ubunzima: I-608 gram
Ukuchasana: IP67 ingaphantsi kwemizuzu engama-30
Ilaphu elinemibala emibini
I fleet emanzini
Sinefayile ye- Ukutyabeka kwenayiloni kuso sonke isixhobo, Ngelixa ngaphambili isithethi songamela ngaphezulu kweempawu zaso (kunye nesigebenga) samaqhosha evolumu. Ngasemva sinelogo yenylon yasentsomini esebenza ukuyixhoma nokuyihambisa, kananjalo nakwindawo esezantsi isiciko sokungena manzi esifihla esincinci Izibuko lokutshaja le-microUSB (ngempama yokuqala esihlahleni ngokungabheja kwi-USB-C). Ngaphezulu sinako amaqhosha amathathu: Layita icima; Iqhosha loMlingo kunye nokudityaniswa kweBluetooth, ifemi ihlala ibheja kulula kumaqhosha ayo kwaye iphinde yaphinda. Ewe ayisisixhobo esincinci, kodwa iwela ngaphakathi kwengcinga, eyona nto ingamangalisa ngakumbi bubunzima bayo, ngaphezulu kwesiqingatha sekhilogram kwisixhobo esinama-360º odiyo enamandla aphezulu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba kwiphakheji sifumana imiyalelo kunye nentambo yokutshaja, kodwa hayi umbane.
Izixhobo zekhompyutha kunye nezinto zonxibelelwano
Ukunxibelelana kwahlukile, asinalo naluphi na uhlobo lwe-AUX yegalelo kuba inokubeka emngciphekweni ukuthembeka kwesixhobo, kodwa ukunyaniseka ... ingaba kungayindleko enjani ukuyifaka? Yiba ngohlobo esinokuba nalo kuphela Bluetooth 4.2 njengekuphela kwenkqubo yokuthumela isandi kuwe. Sinesicelo esisemthethweni esiya kusivumela ukuba sibhangqe izixhobo ezisibhozo kuyo, siyila Inkqubo ephuculweyo ye-multiroom eya kudala uthungelwano ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-45 kuluhlu, sivavanye umgangatho nezinye izixhobo zohlobo kwaye zisebenza ngendlela elula, ngaphandle kokubonisa iingxaki kwisandi okanye kunxibelelwano, izihlobo ezimbalwa kunye nengqokelela yoluhlu lweBOOM inokuphosa itheko elilungileyo eliphelayo. Ukucaphukisa abamelwane, ke kuya kufuneka ubambe kancinci. Ukubhekisa kwi inkululeko Siya kuba neeyure ezili-15 kwimiqulu ephakathi, apho sikwazi ukufikelela kwiiyure ezili-12 kwimiqulu ephezulu Ngentlawulo enye, ewe, intlawulo epheleleyo iya kusithatha phantse iiyure ezimbini.
Sinezinga eliphezulu lesandi I-90 dBA kuluhlu lwamaxesha lwe-90 Hz-20 kHz Ndiyabulela kubaguquleli bayo beesentimitha ezi-5 kunye ne-5 x i-10-sentimitha radiator zokunyusa ii-bass, kodwa onke la manani… akunjalo? I-BOOM 3 ivakala yomelele, enyanisweni sinokuthi iyavakala ukuba yomelele kakhulu, ngaphezulu ngokwaneleyo ukuba ingene kwigumbi lonke okanye eofisini. Ukongeza, kuvavanywa ngeempawu ezahlukeneyo zeSpotify kunye nabanye ababoneleli kwaye inyani kukuba i-BOOM 3 khange ibe neengxaki zokusebenza okanye ukugqwetha kwesandi ngevolumu ephezulu.I-bass ilunge kakhulu kwaye le Ndlebe yokuGqibela yenza ngokumangalisayo kokubini kumculo wentengiso kwaye xa sitshintshela kwiRock & Roll okanye i-flamenco, andinakukufihla ukuba olu hlobo lwentengiso lunikezela ngombono wam othobekileyo ngezona zithethi zingabinazingcingo zisuka emarikeni. Asimele silibale ukuba I-BOOM 3 inesandi esingu-360º, esiqinisekisa ukuba iya kuvakala yomelele kwaye ilungile naphina apho siyibeka khona.
Iqhosha loMlingo kunye nesikhululo sokutshaja
Siqala ngesixhobo esisisiseko, siyakhumbula ukuba ngeli xesha i-Ultimate Ears ibonelele ngesixhobo sayo ngohlobo lwe "isinxibelelanisi" ngasemva esiya kuthi sisivumele ukuba sifumane isiseko sokutshaja, oku kuyinyani ngokwenene koko besikuthethile ngaphambili, ukuba Uyakwazi ukusebenzisa i-BOOM 3 nakwimeko evaliweyo enjengeofisi kwaye uyithathe ngokulula kwisiseko sayo sokutshaja kwaye ube nakho ukuyonwabela ngaphandle, oku kuyamangalisa ngokwenene. Le tshaja imhlophe ibizwa Amandla phezulu kwaye kufuneka sibeke isixhobo phezulu, Ngaphandle kokutshaja ngaphandle kwamacingo, iya kuyigcina ikhuseleke kakuhle ukunqanda ukutyibilika kwaye iya kuhlala ihlale ilungele ukuqhuba. Singasisebenzisa isithethi ngelixa sisisiseko, kodwa awungekhe ulithande ixabiso, ngeenxa zonke 41 euro zithengiwe kwiwebhusayithi yabo.
Iqhosha loMlingo yindlela iLogitech enenjongo yokuba sinxibelelane ngayo nomculo wethu, ikuvumela ukuba ulawule iApple Music kunye neDeezer yePrimiyamu ngokusetyenziswa kwezicelo zabo kwaye ukhethe ukuba yeyiphi imikhondo yesiko okanye uluhlu olupheleleyo esilulawulayo ngeli qhosha. Ngaphandle kokuyila into entsha kwinkampani, ngokunyanisekileyo ubunzima bokusetyenziswa kunye nokusebenzisa usetyenziso lweeNdlebe eziGqityiweyo ukhethe ukuqhubeka nokudlala umculo ngendlela yesiko kunye nokulawula umxholo kwifowuni ephathwayo.
Ixabiso eliphezulu lesiseko sokutshaja
Sebenzisa intambo ye-microUSB
Njengamaxesha onke, siqala ngento esiyithandayo kancinane. Kwindawo yokuqala kufuneka ndibuyele ekutsaleni iindlebe zenkampani yokuqhubeka nokusebenzisa i-microUSBEwe ndiyazi ukuba ngowona mgangatho ubalaseleyo kwaye sinayo sonke phaya, kodwa ukuba asithathi manyathelo aqinisekileyo kwi-USB-C siza kuyilibazisa ngokungeyomfuneko. Kwaye ayikagqityi ukundikholisa ukuba into yokufikelela kwisigqibo njengesikhululo sePower UP enokuthi inike i-BOOM 3 iseseji yesibini iindleko eziphantse zibe sisiqingatha seso sixhobo, enyanisweni ndicinga ukuba kufanele ukuba ziyifake kunye nesixhobo.
Izixhobo, uyilo kunye nokumelana okufanayo
Amandla kunye nomgangatho wezandi ezingama-360º
Ukunxibelelana kunye nokusebenziseka lula
Kwakhona ngeeNdlebe eziPhezulu kufuneka nditsho ukuba eyona nto bendiyithanda kakhulu ibichanekile umgangatho omkhulu wesandi osibonisayo, inamandla kwaye icacile. Kwicandelo laso, isithethi sikwaxhathise ngokunganyangekiyo kwaye iyaxatyiswa ngaphandle, apho iya kusebenza ngokulula okukhulu. Uyilo luhlaziyiwe kwaye okungcono, ngokwembono yam impumelelo iyonke kunye ne-boom ngoku ayingqubani phantse kuyo nayiphi na imeko.
Ngokuqinisekileyo i-BOOM 3 yenye yeendlela ezizezinye ezilungileyo esinokuzifumana kudidi lwazo, ukungathethi okona kulungileyo. Sinezandi ezingama-360º ezinamandla amangalisayo ngokobungakanani bayo, ukuxhathisa okuya kusenza sikholelwe ukuba ukwaphula nje akunakwenzeka kunye noyilo olunika ukholo olukumgangatho walo. Izixhobo azingqubani kwaye ke phantse yonke into. I-BOOM 3 iye yathengwa ngeenxa zonke kwabo bacacileyo malunga nento abayifunayo kunye nento abayifunayo, ewe, kuyakufuneka uye ekuphumeni ukuze ufumane imveliso yalo mgangatho, kwaye kunjalo KwiAmazon ungayifumana kwi-118,15 euro. Lixabiso eliphezulu, sele siyazi ukuba, ngakumbi xa kungabikho zinikezelo iphehlelelwa ukuya kuthi ga kwi-150 euro, kodwa inyani kukuba ukuba ufuna isithethi esinezi mpawu esi sisalathiso kwaye singathi ukuba zonke ezinye zizinto ezingena endaweni yayo Akukho nzima kum konke konke ukuqonda ukuba i-BOOM 3 inokuba sesona sixhobo silungileyo kudidi lwayo, kwaye ke, ezi ntlobo zeemveliso zinexabiso. Kungenxa yoko Andinakukhetha ngaphandle kokucebisa i-BOOM 3 ukuba into oyifunayo isithethi esinganyangekiyo, ngokuzimela okukhulu kwaye ngokungathandabuzekiyo ngomgangatho omkhulu wesandi ongasokukunikwa ngabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Iindlebe zokugqibela IBHOMU 3, isithethi seendawo zonke kunye nawo wonke umgangatho